Mind Full of Mystery ! - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
Mind Full of Mystery ! | Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
Background Image Source: Abstract Thinking from Learning Mind
by रितेश September 7, 2019
“के हो तिम्रो पारा ?”
“के भो मेरो पारा ?”
“अझ थाहा नपाएको जस्तो गर्छौं ?”
“मैले के गरि र ?”
“भो, धेरै नाटक गर्नु पर्दैन !”
“भन’न के भयो ?”
“भो, आजबाट बोल्नु पर्दैन मसँग !”
फोन काटिन्छ । म जिल्ल पर्छु । केही समयपछि उनलाई फेरि फोन लगाउछु । मोबाईल स्विच अफ भएको सन्देश कानको पर्दामा टाँसिन्छ ।
कस्तो अचम्मको केटि ! व्यर्थ रिसाउँछे । मैले के चाहिँ गल्ती गर्या छु र ! साँच्चै भनेको केटिलाई बुझ्नै गार्हो !
एउटा प्रसिद्ध भनाइ / डाइलग छ नि- महिलाको मस्तिष्कलाई बुझ्न् / पढ्न सबैभन्दा कठिन हुन्छ ।
प्रसङ्ग / कुरा उप्कि हाल्यो, एकछिन यतै झुन्डिउ न त ।
एक अध्ययनको अनुसार- कुनै पनि काम गर्दा अथवा केही सोच्दा पुरुषको मस्तिष्कको एकभाग मात्रै चल्छ / सक्रिय हुन्छ तर महिलाको मस्तिष्कको दुईभाग चल्छ / सक्रिय हुन्छ ।
पुरुषको दाँजोमा एकैचोटीमा धेरै कुराहरु सोच्न सक्छन्, महिलाहरु ।
सायद यहीँ कारणले पनि हुन सक्छ, महिलाहरुको मस्तिष्क मिस्ट्रीले भरिपुर्ण हुन्छ । तै भएर पनि होला, संसारमा सबैभन्दा धेरै मिस्टिरियस / थ्रीलर किताब लेख्नेमा महिला नै अघि छन् । यहाँ नाम भनेर / लेखेर साध्य नै छैन ।
किताबको कुरा आयो । लेखकको कुरा आयो । मिस्ट्रीको कुरा आयो । ‘अगाथा क्रिस्टि’को नाम छुटाउने कुरै आउँदैन नि ।
तपाईंहरुले चिन्नुहुन्छ होला नि ?
उनलाई “Queen Of Mystery” भन्दा फरक पर्दैन । उनको नाम ‘गिनिज वर्ड रेकर्ड’मा पनि दर्ता भएको छ । साठी भन्दा धेरै मिस्टिरियस नोभेलहरु लेखिसकिन् । मिस्टिरियस नाटकहरु, छोटा कथाहरु त कत्ती कत्ती ।
यहाँ नाम भनेर / लेखेर साध्य नै छैन ।
मैले ‘अगाथा क्रिस्टि’लाई चिनेको 1958 मा प्रदशित भएको फिल्म “The Witness For The Prosecution” बाट हो । छोटो कथा “The Witness For The Prosecution” बाट नाटक बन्यो र नाटकबाट फिल्म । यो मिस्टिरियस फिल्म पक्का / जरुर हेर्नुहोला, मस्तिष्क हल्लाइदिनेछ ।
कुरा त कहाँबाट कहाँ पुग्यो है ! यस्तै हो, कुरो र कुलो !
‘अगाथा क्रिस्टि’को नाम आइहाल्यो उनीसँग जोडिएको एउटा मजेदार / मिस्टिरियस किस्सा बताइहाल्छु है !
झ्याउ नमानी पढ्नुहोला !
कुरा / किस्सा 1926 डिसेम्बर महिनाको हो । अगाथा क्रिस्टिको छैटौं किताब “The Murder Of Roger Ackroyd” ले बजारमा राम्रो साथ पाइरहेको थियो । उनी अर्को मडर मिस्ट्री किताब लेख्ने सुरसारमा थिइन् । उनी एकाएक हराइन् / गायब भइन् ।
रहस्यमय किताब लेख्ने मान्छे रहस्यमय तरिकाले बिलाइन् । उनी हराएको खबर देश / विदेशमा सबैतिर फिजियो । कयौं मान्छेहरु उनको खोजीमा निस्किए । हजारौं भन्दा बढी प्रहरीहरु खोजीमा सामेल भए । प्रशिक्षण प्राप्त कयौं कुकुरहरु हिडियो । कसैलाई खोज्न भनेर पहिलोपटक प्लेनको साहयता लिइयो ।
खोजीको केही दिनपछि उनको गाडी अव्यवस्थित रुपमा सडक किनार फेला परियो । गाडी भित्र न उनी थिइन्, न कुनै दुर्घटना भएको संकेत । माहोल तातिदै गयो । रहस्य चुलिदै गयो । अनेक थरिका प्रश्नहरु उब्जिन थाले । तर्कहरु बर्सिन थाले । शंकाहरु जम्मा हुन थाले । कति मान्छेले त आफ्नो अर्को किताबको लागि गरेको ‘पब्लिस्क्टी स्टन्ट’ हो पनि भने ।
चर्चित बुक सिरिज “Sherlock Homles” र “The Lord Peter Wimsey” का लेखकहरु, Sir Arthur Conan Doyle र Dorothy L. Sayers पनि उनको खोजिमा सामेल भएका थिए । थुप्रै दिनसम्म पनि ‘अगाथा क्रिस्टि’लाई कसैले / कोहिले फेला पार्न सकेनन् ।
उनी रहस्यमय तरिकाले हराएको किस्सा उनको आफ्नै कुनै रहस्यमय किताब भन्दा कम थिएन । उनलाई उनकै भुतपुर्व पतिले मारेर गायब गराएको हल्ला पनि फिजियो । कतै दुरमा गएर आत्महत्या गरेको आशंका पनि गरियो । साँच्चै, यी कुराहरुलाई मान्ने’नै हो भने पनि उनको मृत शरीर कतै फेला परिएन ।
हराएको एघारौं दिन कतै दुरमा रहेको एउटा होटलमा उनलाई फेला पारियो । उनी स्वस्थ, सुरक्षित अबस्थामा थिइन् । उनी फेला परेपछि झन् धेरै रहस्यहरु उब्जिए । प्रश्नहरु ब्युँझिए ।
उनी किन हराइन्, कसरी हराइन्, यति दुर होटलमा कसरी आइपुगिन् उनलाई स्वयंम त्यसको कुनै ज्ञान थिएन । अझ होटलमा उनले आफ्नो होइन, आफ्नो भुतपुर्व पतिको प्रेमिकाको नाम लिएर बसेकी थिइन् । कस्तो रहस्य ?
यो रहस्य आजको मितिसम्म पनि खुलेको छैन । थुप्रै थ्योरीहरु निस्किए । अनुमान लगाइए । तर अझैपनि यो रहस्य अप्रमाणित छ, अस्पष्टिकृत छ, अपरिभाषित छ ।
‘अगाथा क्रिस्टि’ एघार दिनसम्म किन हराए ? कता हराए ? यहीँ प्रश्न / रहस्यमा आधार भएर टेरि लोएनले “Agatha and The Truth of Murder” फिल्म बनाए । फिल्ममा बताइएको / देखाइएको छ, अगाथा खासमा कुनै ‘मडर मिस्ट्री’ पत्ता लगाउन हराएकी थिइन् भन्ने ।
“रहस्य सिर्जना गर्ने / लेख्न सक्ने लेखकले रहस्य पत्ता पनि लगाउन सक्छन् ।”
फोन बज्छ । म उठाउछु ।
“अघि किन रिसाको ?” म सोध्छु ।
“त्यतिकै रे ?”
“अनि के त, तिमीसँग जिस्किन न नपाउनु ?”
“त्यस्तो पनि जिस्केको हुन्छ ?”
“अनि कस्तो हुन्छ त ? ल ल अब तिमी चै शुरु न होउ । म आउँदैछु ।”
मैले अघि नै तपाईंहरुलाई भने’नि महिलाको मस्तिष्कलाई पढ्न / बुझ्न एक्दमै कठिन ।
मलाई ‘जिलिएन फ्लेन’को मिस्टिरियस नोभेल ‘गन गर्ल’को याद आउँछ ।
‘गन गर्ल’को सुरुवातमै पति आफ्नो सुन्दर पत्नीलाई सम्झिदै एउटा डाइलग भन्छ- म सधैं तिम्रो टाउकोको बारेमा सोच्छु । आफुलाई त्यो मायालाग्दो खोपडी फुटाएर भित्र रहेको मस्तिष्क पढेको कल्पिन्छु, उत्तरहरु / रहस्यहरु खोज्ने / पढ्ने / बुझ्ने प्रयासमा ।
अन्त्यमा फेरि पनि भन्न चहान्छु, “The Witness For The Prosecution” जरुर हेर्नुहोला । नत्र, बोल्दिन तपाईंसँग !